TASK MANAGER: ARỤMỌRỤ NA-ENYO ENYO. ESI ACHỌTA MA WEPU NJE? - NCHEDO (NJE) - 2019
Task Manager: arụmọrụ na-enyo enyo. Esi achọta ma wepu nje?
Ọtụtụ n'ime nje ndị dị na Windows OS na-agbalị ịzobe ọnụnọ ha site n'anya onye ọrụ. Na, mmasị, mgbe ụfọdụ, nje virus na-edozi nke ọma dị ka usoro Windows, nke mere na ọbụna onye ọrụ nwere ahụmahụ agaghị achọta usoro enyo enyo.
Site n'ụzọ, ọtụtụ n'ime nje ndị ahụ nwere ike ịchọta na Windows Task Manager (na usoro taabụ), wee lelee ọnọdụ ha na diski ike ma wepụ ya. Naanị nke a, nke dịgasị iche iche usoro (na mgbe ụfọdụ, ọtụtụ iri na abụọ n'ime ha) bụ ihe nkịtị na nke ndị a na-ewere dịka enyo?
N'isiokwu a, m ga-agwa gị otu m si achọta usoro nrubeisi na njikwa ọrụ, nakwa otú m si emesị wepụ usoro nje virus site na PC.
1. Otu esi abanye njikwa ọrụ
Kwesịrị ịpị bọtịnụ ọnụ CTRL + ALT DEL ma ọ bụ CTRL + SHIFT + ESC (na-arụ ọrụ na Windows XP, 7, 8, 10).
Na njikwa ọrụ, ị nwere ike ịlele mmemme niile na-arụ ọrụ na kọmputa gị (taabụ ngwa ma usoro). Na usoro taabụ i nwere ike ịhụ mmemme niile na usoro usoro nke na-agba ọsọ na kọmputa. Ọ bụrụ na usoro na-ebu nnukwu ihe nhazi (bụ nke a na-akpọ CPU), mgbe ahụ ọ ga-agwụ.
Windows 7 Task Manager.
2. AVZ - ịchọ usoro ntinye
N'ime nnukwu obo nke usoro nhazi na njikwa ọrụ, ọ naghị adị mfe mgbe niile ịchọta ma chọpụta ebe usoro usoro dị mkpa, na ebe nje "na-arụ ọrụ" nke na-agbanwe onwe ya dịka otu n'ime usoro usoro (dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ nje dị na masked site n'ịkpọ onwe ha svhost.exe (na nke a bụ usoro dị mkpa maka ọrụ nke Windows)).
N'uche m, ọ dị mfe ịchọta usoro ntinye enyo site na iji otu nje virus - AVZ (n'ozuzu, nke a bụ ihe mgbagwoju anya nke ọrụ na ntọala maka ịchekwa PC).
Ebe nrụọrụ weebụ (ibid, na njikọ njikọ): //z-oleg.com/secur/avz/download.php
Iji malite, nanị wepụ ihe dị na archive (nke ị na - ebudata site na njikọ dị n'elu) ma na - eme ihe omume ahụ.
Na menu ọrụ Enwere njikọ abụọ dị mkpa: onye njikwa na njikwa njikwa.
AVZ - ọrụ ntanetị.
M na-ebu ụzọ ebu ụzọ gaa na njikwa mmalite ma hụ mmemme na usoro na-arụ ọrụ mgbe Windows malitere. Site n'ụzọ, na nbudata ihuenyo n'okpuru ị nwere ike ịhụ na ụfọdụ mmemme na-akara na-acha akwụkwọ ndụ (nke a na-egosi na nchekwa usoro, na-aṅa ntị na usoro ndị ojii: ọ nwere ihe ọ bụla n'etiti ha na ị wụnye?).
AVZ - njikwa njikwa.
Na njikwa usoro, foto ahụ ga - adị: ọ na - egosiputa usoro ndị na - aga n'ihu na PC gị. Lezienụ anya na usoro ojii (nke a bụ usoro nke AVZ enweghị ike ịchọta).
AVZ - Manager nhazi.
Dịka ọmụmaatụ, nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi otu usoro enyo - o yiri ka ọ dị n'usoro nhazi, naanị AVZ amaghị ihe ọ bụla banyere ya ... N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị nje, mgbe ọ bụla usoro mmemme ọ bụla mepee ọwa ọ bụla na ihe nchọgharị ma ọ bụ na-egosi ọkọlọtọ.
N'ikpeazụ, ọ kachasị mma ịchọta usoro dị otú ahụ: mepee ebe nchekwa ya (pịa aka nri ma họrọ "Mepee ebe nchekwa nchekwa" na menu), wee mezue usoro a. Mgbe achichachara - wepụ niile enyo site na ebe nchekwa nchekwa.
Mgbe usoro yiri nke a, lelee kọmputa gị maka nje na adware (ọzọ na nke a n'okpuru).
Nchịkọta Ihe Ọrụ Windows - mepee ọnọdụ nke ọnọdụ faịlụ.
3. Ịchọta kọmputa maka nje virus, Adware, Trojans, wdg.
Iji nyochaa kọmputa gị maka nje virus na ngwa AVZ (ọ na-enyocha ya nke ọma ma kwadoro dị ka mgbakwunye na antivirus isi gị) - ị nweghị ike ime ntọala ọ bụla ...
Ọ bụ iji akara diski nke ga-edozi na ịgụ isiokwu na pịa bọtịnụ "Malite".
Uru nje nje AVZ - Ntinye aka PC maka nje.
Iṅomi ahụ dị ngwa: o were ihe dị ka minit 10 (ọ dịghị ọzọ) iji lelee 50GB disk na laptọọpụ m.
Mgbe nlele zuru oke kọmputa maka nje, Ana m akwado ịlele kọmputa gị na ihe ndị dị mkpa dị ka: Cleaner, ADW Cleaner or Mailwarebytes.
Cleaner - njikọ na ụlọ ọrụ. mkpokọta: //chistilka.com/
ADW Cleaner - jikọta na ọfịs. website: //toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
Mailwarebytes - njikọ na ọfịs. weebụsaịtị: http://www.malwarebytes.org/
AdwCleaner - PC scan.
4. Kwado ezigbo egwu
Ọ na-apụta na ọ bụghị Windows niile ọ bụla na-adịghị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ikike ikike site na draịva netwọk ma ọ bụ mgbasa ozi nke mbughari - mgbe ị jikọọ ya na kọmputa gị - ha nwere ike ibute nje virus! Iji zere nke a - ịkwesịrị iwepụ ikike. Ee, n'ezie, n'otu aka, ọ bụ ihe na-adịghị mfe: diski agaghịzi arụ ọrụ auto, mgbe ịtinye ya n'ime CD-ROM, ma faịlụ gị ga-adị mma!
Iji gbanwee ntọala ndị a, na AVZ, gaa na mpaghara faịlụ ahụ, wee gagharịa ọkachamara nsogbu nsogbu. Mgbe ahụ, họrọ otu ụdị nsogbu (dịka ọmụmaatụ, nsogbu usoro), ogo nke ihe egwu, wee gụọ PC. Site n'ụzọ, ebe ị nwekwara ike kpochapụ usoro nke faịlụ junk ma hichapụ akụkọ ihe mere eme nke ịga na saịtị dị iche iche.
AVZ - ịchọ na idozi ọma.
Site n'ụzọ, ma ọ bụrụ na ị hụghị ụfọdụ usoro na njikwa ọrụ (nke ọma, ma ọ bụ ihe na-ebu ihe nhazi ahụ, ma ọ dịghị ihe ọ bụla na-enyo enyo na usoro), mgbe ahụ, m na-akwado iji Usoro ntinye ihe nchọgharị (//technet.microsoft.com/ru-ru/bb896653.aspx ).
Nke ahụ bụ ihe niile, ọdịmma!